Cabsi Haweenka Soo Wajahdey iyo 50 Haween ah oo Tuugo Timihii Ka Furatay – Radio Daljir
Cabsi Haweenka Soo Wajahdey iyo 50 Haween ah oo Tuugo Timihii Ka Furatay
Agoosto 4, 2017 8:22 b 0
“Waxa indhaha hal mar iga maray iftiin hilaac ahaan ah ka dib waaN miirdaboolmay saacad ka dib ,waxa aan arkay timahaygii oo la jaray,” waxaa sidaasi sheegtay Sunita Devi, oo ah haweenay 53 jir ah oo ku nool Bhimgarh Kheri ee degmada Gurgaon ee gobolka Haryana.
“Ma awoodo in aan hurdo amaba aan si toos ah howl u qabsado ,waxa aan aqriyay in dhacdooyiinkan oo kale ay ka dhacaan Rajasthan,balse marna kuma fikirin in ay aniga igu dhacayso,” ayay ku nuuxnuuxsatay.
Waxa ay sheegtay in waxa weerarka ku soo qaaday uu ahaa nin da’a ah oo ku labisan dhar midibkiisu yahay caddaan indhuhu qabanayaan.
” Waxa aan waday howsha guriga markaan arkay wax madow oo wayn una eg Bisad waxa aan dareemay qof taabanaya garabhayga ,markaas ayaana miir iigu danbaysay “ayay tiri Reena.
AMISOM iyo Ciidamada Dowladda oo Maanta Ka Baxay Deegaanka Leego